SAWIRRO: Shir looga hadlayo Amniga oo ka dhacay Gaalkacyo, & howlgalada – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
January 25, 2022 Xuseen 2
Shir looga hadlayay xoojinta Amniga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug, iyo dardargelinta canshuuraha ayaa lagu qabtay magaaladaas.
Shirka oo ay ka qeybgaleen Duqa degmadda Gaalkacyo, kuxigeenka Taliyaha Qeybta Booliiska gobalka Mudug, iyo saraakiil kale, ayaa lagu gorfeeyay dardargelinta Amniga Gaalkacyo, iyo dhacdooyinkii dhowaan ka dhacay magaalada.
Saddex qof oo labo kamid ah ay yihiin saraakiil kamid ah Ciidanka Amniga Puntland, ayaa lagu dilay magaalada Gaalkacyo, iyadoo sidoo kale Puntland iyo Galmudug ay wadaan howlgallo ka dhan ah kooxaha ka ganacsada maandooriyaha.
Sidoo kale, Magaalada Gaalkacyo ayaa todobaadkan waxaa dib uga bilowday Maxkamadeynta maxaabiista kooxda Al-Shabaab ee lagu soo qabtay howlgallada ka socda magaalada, taas oo dhowaanahan hakad ku jirtay.
Caalamku waa ogyahay somali waxay tahay kuwa xalane iyo ashabaab waxay isticmaalan kuwa daraga,khamriga(qanis soo wadaha umulkhabaais)cabah qof reer hebela buu dilin alkolistuh markaas qabiil loo dagaalamin aabahay gablanyay boqolaal baa ku dhintaa fitankaas is dhihi maayaan khamiri cabah(qomuludka soo wadaha)mujtamaca baabi’ini aanu iskaqabano.Belo waxay joogta meshay dadxunku aan Ilaah aqoon wax ku cabaan. Dadaw fitanka dumarka iyo alkolista kamriga kabaayac mushtra ka dig toonaada
soomaaliya waxay la dahay madax fahamta meesha ay u socoto xaajada soomaaliya ee ay la damacsan yahiin Ajaanibtu.Raggii soomaaliya ka bad-baadin lahaaa dhibaatooyinka haysta shacabka waa kuwaas shanso ku diriraya kuraas iyo doolar.Warna kama hayaan shacabka u dhaxeeya shabaab iyo abaaraha kulul.